Nihidy tamin'ny firenena manontolo i Nouvelle-Zélande noho ny tranga COVID-19 iray
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao » Nihidy tamin'ny firenena manontolo i Nouvelle-Zélande noho ny tranga COVID-19 iray
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny fikatonan'ny firenena any Nouvelle-Zélande dia tokony haharitra telo andro, raha any Auckland sy Peninsula Coromandel kosa haharitra herinandro ny fihidiana.
Tranga COVID-19 vaovao iray notaterina tany Nouvelle Zélande.
Nanambara ny praiminisitra Nouvelle-Zélande fa hidina ny firenena.
Niely haingana tany Nouvelle-Zélande ny virus.
Niresaka tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety omaly, ny praiminisitra New Zealand Jacinda Ardern dia nanambara fa ny kiwi dia hiharan'ny fanidiana 'ambaratonga efatra' manerana ny firenena manomboka amin'ny 11:59 alina ora ao an-toerana (11:59 maraina GMT) taorian'ny tatitra nataon'ny COVID-19 vaovao tokana raharaha tany Auckland.
Araka ny voalazan'i Ardern, tranga voan'ny coronavirus no nahamarika tany Auckland fa io no aretina azo avy amin'ny fiarahamonina voalohany hatramin'ny volana feb.
"Aleo manomboka avo lenta ary midina ambany fa tsy manomboka ambany loatra, tsy misy otrik'aretina ary mahita azy mihetsika haingana," hoy ny praiminisitra, raha ny amin'ny "vokadratsin'ny vokany ratsy" no niainan'ireo firenen-kafa sy Aostralia teo akaiky teo tamin'ny tsy fitomboka. mivoaka ny virus amin'ny dingana voalohany.
Ny fanidiana ny firenena dia tokony haharitra telo andro, raha any Auckland sy Peninsula Coromandel kosa haharitra herinandro ny fihidiana. Eo ambanin'ny fameperana 'ambaratonga fahaefatra' - ny fepetra henjana indrindra any Nouvelle-Zélande - ny kiwi dia tsy afaka miala amin'ny tranony fotsiny ho an'ny fivarotam-panafody, fivarotana enta-mavesatra, fitsapana COVID-19, fitsaboana ary fanaovana fanatanjahan-tena eny amin'ny manodidina.
Mbola tsy fantatra aloha raha tompon'andraikitra amin'ny raharaha COVID-19 tokana ao Nouvelle Zélande ny Delta variant.
Ity tranga mitoka-monina ity dia ny aretina voalohany nampitaina teto an-toerana nanomboka ny 28 febroary lasa teo, ary nandrava ny fihodinana enim-bolana tsy nisy raharaham-piarahamonina tokana.
Ny praiminisitra dia nanome ny politikany ny fanidiana ny valim-panidiana mialoha ary ny fanidiana ny sisintany henjana mba hampijanonana ireo aretina tsy hidiran'ny firenena. Tamin'ny herinandro lasa teo, nanambara i Ardern fa hanokatra ny sisin-taniny i Nouvelle-Zélande amin'ny fiandohan'ny taona 2022 raha vantany vao vita vaksiny ny ankamaroan'ny mponina.
Hatramin'ny nipoahan'ny COVID-19 tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, ny firenena 5 tapitrisa teo ho eo dia niatrika ny aretina pesta raha oharina amin'ireo firenena hafa, izay nahitana tranga maherin'ny 2,500 sy fahafatesan'olona 26.